mukana - Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd.
1. Isu tiri vagadziri vane hunyanzvi mukugadzirwa kwesimba rekuchengetedza magetsi mabhokisi masaini ezvitoro zviri nyore.Hapana mumiriri wekomisheni yekushanda nesu.
2. Kubva payakatangwa makore manomwe apfuura, kambani yakawana zvibvumirano zvina zvenyika muchitoro chekureruka chekugadzira bhokisi rekugadzira.
3. Kambani yedu ine fekitari yehunyanzvi ine nzvimbo ye4,200 square metres uye mana mabhokisi emwenje achigadzira mitsetse yekugadzira.
4. Zhengcheng iye zvino yakashanda zvinopfuura 100 brands muChina uye inogadzira anenge 30,000 mamita emabhokisi emagetsi ekuchengetedza magetsi pagore.
5. Kambani yedu yakahaya vagadziri vehunyanzvi kuti vape dhizaini yedhizaini yezviratidzo zvechitoro chako.Chirongwa chedu chekugadzira hachina muripo.
1.Bhokisi rechiedza rakazara rinopedza simba, uye zvigadzirwa zvayo zvekuvhenekera zvakavakwa zviri nyore kukuvara.Iwo anotungamirwa anopenya mavara haaonekwe husiku, uye mavara anopenya anowanzo kune akajeka mavara.
2.Mabhodhi echinyakare anonyanya kugadzirwa nehose , uye kugadzirisa kunoda hunyanzvi hwakasimba, uye mutengo wekugadzirisa wakakwira, kana kuti haugone kugadzirisa, zvichikonzera kudhura kwekushandisa.
3.Kugadzirisa basa rakaoma zvikuru, saka mushure menguva yewaranti, vagadziri havadi kugadzirisa zviratidzo.
4.Mutengo wekutanga wekudyara wekugadzira zvikwangwani zvemasaini zvakaderera, nekuti zvikwangwani izvi zvinonyanya kugadzirwa neakareruka mapaneru.Nekudaro, mapaneru achapera, deform, dent uye mamwe matambudziko mukati me3 kusvika 5 mwedzi, izvo zvinopfupisa zvakanyanya hupenyu hwebasa rechiratidzo.
5.Mukugadzirwa kwemabhokisi emagetsi echinyakare, chloroform dilute glue inowanzoshandiswa kubatanidza swatches uye mapaneru.Kuita kwekuisa chisimbiso hakuna simba, uye kunokanganisa kusimba kwetembiricha uye zvinhu zvinofamba zvichikonzera kutsemuka.Guruva netsvina zvinounganidza zviri nyore pamaswachi uye mapaneru mushure mekugezwa nemvura.Naizvozvo, guruva netsvina hazvigone kucheneswa, uye zvinokanganisa kupenya kwechikwangwani pamwe nekukuvadza kutaridzika kwechikwangwani.
6.Traditional light boxes anonyanya kugadziriswa maererano ne-on-site dimensions.Kana chitoro chikafamba, mwero wekushandiswa kwemasaini wepakutanga uri pasi pe5%.
1.Deredzai mari yekushandisa zviratidzo (simba rekuchengetedza patent chimiro / kuderedzwa kwemari yekuchengetedza / kuwedzerwa kwehupenyu hwebasa).
2.Zvigadzirwa zvedu zviri nyore kuisa uye kutora kusagadzikana-kusina, disassembly-isina kugadzirisa dhizaini yekugadzira, kuita kuti kugadzirisa kuve nyore.
3.The curved panel design inosimbisa zvizere kugadzikana kwemaitiro uye deformation kuramba kwebhokisi rechiedza.
4.V-yakaita 45-degree light emitting led lighting patented product, kuitira kuti simba rechiedza rigone kushandiswa zvakanyanya.
5.Modular kugadzirwa uye kutakura kunoita kuti zvive nekukurumidza kuvaka zvitoro.
6.More yakatanhamara ruvara uye magadzirirwo, mamwe matatu-dimensional anoona ruzivo.
7.Iyo inofananidzwa necanopy yakakosha inoyevedza uye yakanaka, ichidzivirira bhodhi kubva kune mavara.
1.More mwero, wakajairika, wakabatana, wakanyanya nyore
2. Mvura uye Dust-proof
Zhengcheng simba rinochengetedza mwenje bhokisi rinotora rakasiyana-rakavharika-rakavharika bhokisi muviri dhizaini dhizaini kuti ive nechokwadi chekuti nzvimbo yemukati yebhokisi rechiedza haina mhepo zvakanyanya uye inoparadzanisa mhute, huruva uye umhutu.
3.Ingenious kuchengetedza maitiro ekugadzirisa
Iyo yakangwara mwenje chubhu yekutsiva tekinoroji yeZhengcheng inochengetedza magetsi bhokisi haidi chero maturusi kana disassembly yebhokisi.Chiedza chechiedza chinogona kuchinjwa mumaminitsi mashanu, izvo zvinoderedza zvikuru kuoma kwekugadzirisa uye kuderedza mari yekuchengetedza yechiratidzo.
4. Ultra yakaderera simba rekushandisa
Yepamberi yekuvhenekesa nzvimbo dhizaini inoona yechipiri kuratidza kwesimba rechiedza uye inowedzera kushandiswa kwemwenje masosi.Kuenzaniswa nemabhokisi emwenje echinyakare, Zhengcheng magetsi ekuchengetedza magetsi mabhokisi anogona kuchengetedza 65% yemagetsi.
Zhengcheng simba rekuchengetedza mwenje bhokisi mwenje nzira
Kutora zvitoro zana zveimwe mhando yezvitoro zviri nyore, masaini mabhodhi ari 1m*10m (maawa makumi maviri nemana), uye mwenje inobatidzwa kwemaawa gumi nemaviri pazuva semuenzaniso, kuenzanisa kwekushandiswa kwesimba pakati peZhengcheng ekuchengetedza simba mabhokisi emwenje uye mwenje wakajairwa. mabhokisi.
Traditional light box Zhengcheng Energy -kuchengetedza Chiedza Bhokisi
light chubhu LED chiedza chubhu (16w) Patented V-yakaita 45 degree led light source (28w)
nzira yekuvhenekera 4 mitsara pamamita, 1.1 mita yekuvhenekesa renji pamutsara, 9 mapoka pamwe chete 7 modules (imwe chubhu / imwe module) + 2 makona (hafu yechubhu / imwe kona), 8 modules yakazara
kushandiswa kwemagetsi 0.016kwh*4rows*9groups*12h/d*365d=2522kwh 0.028kwh*8groups*12h/d*365d=981kwh
bhiri remagetsi (1.2 CNY /KHH) 2522*1.2*100=302600CNY 981*1.2*100=117700CNY
Shandisa Zhengcheng magetsi ekuchengetedza magetsi mabhokisi kuchengetedza mabhiri emagetsi mugore rimwe:
Makore mashanu: 184900CNY/y*5=924500CNY≈138274.04USD
Zviratidzo Zvakavhenekerwa, Pharmacy Signboard, Vacuum Kugadzira Chiedza Bhokisi Signboard, Blister Chiedza Bhokisi Signboard, Kunze Kwechiedza Bhokisi Signboard, Supermarket Signboard,